Nagarik News - घण्टामा तीन पटकसम्म पिसाब फेर्नुपर्छ, के भएको?
होमपेज / स्वास्थ्य / घण्टामा तीन पटकसम्म पिसाब फेर्नुपर्छ, के भएको?
घण्टामा तीन पटकसम्म पिसाब फेर्नुपर्छ, के भएको?	24 Apr 2013 | 00:00am मङ्गलबार १० बैशाख, २०७०
काठमाडौँ - यस पटक डा.जगदीशप्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ न्युरोफिजिसियन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालले तपाईँहरुका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।म दश वर्षदेखि कतारमा अफिसको सेक्रेटरीको रूपमा काम गर्छु। बढी समय कम्प्युटरमा बित्छ। पूरै समय एयर कन्डिसनमा बित्छ। उचाई ६ फिट र ९२ केजी तौल छ। अहिले विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । मलाई टाउको दुख्छ, रिंगटा लाग्छ र पिसाबसम्बन्धी पनि समस्या छ। एक घन्टामा तीन पटकसम्म पिसाब फेर्न जानुपर्छ। हरेक दुई घन्टामा एक लिटर पानी पिउँछु?- बाबुराम सुवेदी, दोहा कतार तपाईंको उचाई र तौलको सन्तुलन थोरै मिलेको छैन। तौल अलि बढी छ। तपार्इंले पानी सचेत भएर खाने हो कि तिर्खा बढी लागेर खानुभएको हो, खुलाउनु भएको छैन। तिर्खा बढी लागेर पानी पिएको र धेरैपटक पिसाब फेर्न जानुपर्ने समस्या छ भने रगतमा सुगरको मात्रा जाँच्नुपर्छ। सबै लक्षण सुन्दा पिसाबसम्बन्धी यस्तो समस्या ब्रेनमा हुने एक प्रकारको खराबीले पनि हुनसक्छ। तपाईंको समस्या ब्रेनभित्रको हर्मन ग्रन्थीमा समस्या आउँदा हुने लक्षणसँग केही मेल खान्छ। जहाँसम्म रिंगटा लाग्ने कुरा छ, त्यो उच्चरक्तचापले गर्दा पनि हुनसक्छ। कम्प्युटरमा बसिरहने मानिसमा घाँटीका हाड खिइएको अवस्थामा पनि रिंगटा लाग्न सक्छ। कसैलाई एसी एलर्जीले पनि समस्या देखिन सक्छ। एकपटक राम्रोसँग परीक्षण गराएपछि कारण पत्ता लाग्छ।